Bbagbo oo laga eryay Beljamka: Ouattara wuxuu isku dubariday golaha siyaasadeed, Soro too - TELES RELAY
ACCUEIL » International • SIYAASADDA • DIB U EEGID • DIB U EEGID AFRICAN PRESS Bbagbo oo laga eryay Belgium: Ouattara wuxuu ugu yeerayaa golihiisa siyaasadeed, Soro sidoo kale
Bbagbo ayaa laga eryay Belgium: Ouattara wuxuu ku biiray golaha siyaasadeed, Soro sidoo kale
ALEXANDRE EKOBE 7 May 2019
Laurent Gbagbo ayaa ka walwalsan kiiska. Iyo wargaysyada Ivorian ayaa daabacay Talaadada 07 laga yaabo inay ka hadlaan. Fiiso uu ku dhamaaday. Ka fogaanshaha Belgium, Ivory Coast, dagaalka u dhaxeeya xakameynta waqooyiga ayaa ku hawlan sida uu qabo Inter. Inkastoo Ouattara ay maanta shirwaynaha siyaasadeed ee RHDP, Guillaume Soro la kulmi doonto Jimcaha Katoola raggiisa.
"Fiisihiisa ayaa ku soo dhacday Belgium, oo ku dhici doona kiiska Gbagbo," ayaa lagu muujiyay fiidnimada maalinlaha ee madaxbannaan. Maalin walba, nooca Fiisaha Beljimka ah wuxuu soo saaray 05 Febraayo 2019 si Laurent Gbagbo ka dib markii uu shuruud ku xiray ICC. Intaa waxaa dheer, maalin kasta waxay ICC u ogolaatay inay go'aan ka gaarto xaaladdaas. "ICC waxay ka jawaabtaa oo sharraxeysaa," ayaa ku warameysa Soir Info. Mawduucaas, Le Quotidien d'Abidjan, oo udhow FPI, wuxuu bixiyaa go'aamada muhiimka ah ee laga soo qaatay Beljamka madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda. "Laga soo bilaabo Belgium, Gbagbo waxay sameysaa go'aano muhiim ah," ayuu akhriyaa bogga hore ee maalin walba.
Doorashada Baarlamaanka Baarlamaanka wuxuu sameeyey mowjado, abuuray kala qaybsanaanta mucaaradka ah ee qaaddey doorashooyinka. "PDCI wuxuu ku dhaleeceeynayaa albaabka Golaha Qaranka," ayuu ku sheegay Le Temps isagoo sheegay in "xisbiga Bédié uu ku eedeeyay xadgudubyada Dastuurka." Kadib, Inter, oo ah "xafiiska cusub ee Baarlamaanka Qaranka: PDCI, Vox Populi, dibad-bax ka qaadista doorashada" ka hor intaa ku daray in "suxufiyiinta ka hortagaya helitaanka gawaarida".
Le Patriote, oo kudhow awoodda, dabeecadda PDCI inta lagu guda jiro doorashooyinka Xafiiska Golaha Qaranka waa qosol. "PDCI ayaa loola jeeda laftiisa! ", Duufaan maalin kasta. Kadib, waajibaadku wuxuu cadeynayaa in Madaxwaynaha Qaranka uu ka gaabsaday PDCI iyo mucaaradka. "Tchomba waa ay ka fogaatay PDCI iyo mucaaradka," isaga oo maalin kasta xiraya RHDP.
Marxaladdan dhismaha Xafiiska Golaha Qaranka ayaa dhammaatay, RHDP waxay u guuraysaa marxal kale. Mid ka mid ah qabashada shirkii siyaasadeed ee ugu horreeyay ee xisbiga maanta oo ku dhawaaqay go'aamo waaweyn. "RHDP, 1er Golaha Siyaasadda, maanta. Ouattara ayaa gaari doonta go'aano waaweyn, "ayuu ku yiri Le Mandat. Waddanku wuxuu ku dhawaaqay ballan ballaadhan maanta. "Kulanka 1ère ee Golaha RHDP ee Siyaasadda: Kulanka weyn ee maanta" aan akhrin karnaa.
Dhinaca kale, Guillaume Soro ayaa sidoo kale isku diyaarinaya inuu qabto kulan weyn oo ku saabsan dhammaan dhaqdhaqaaqyada isaga u dhow. "Soro wuxuu ku baaqayaa dhaqdhaqaaqa isaga u dhow," ayuu yiri Soir Info. Inter iyo L'Inter oo ku qoran "Soro waxay la kulmayaan garsoore Jimcihii Katola".
War kale oo muhiim ah oo ay la socdaan wargaysyada Ivorian ayaa maanta la sii daayay Anne Ouloto. "Si aad u sii wadato booskiisa Ouattara: Anne Ouloto wuxuu quudhsadaa xasuuqa" Wê ", wuxuu ka akhriyaa LG Infos. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Boostada, Isgaadhsiinta iyo Isgaarsiinta Mudane C / "Anne Ouloto" waxa ay cambaareyneysaa xasuusta dhibbaneyaasha Wêh ee dhibaatada ka dambaysa doorashooyinka, "ayaa sheegay in maalin walba. Marka L'Expression uu ku dhawaaqo in Simone Gbagbo waa in lagu dhagaysto Xeerilaaliyaha xaaladdan xasaasiga ah Wê. "Dacwada xasuuqa Wê: Simone Gbagbo, sunta dib u heshiisiinta. Maxay tahay sababta Xeer-ilaaliyuhu u maqlay maqaalkii hore ee Lady, "ayuu yiri maalin kasta oo ku dhawaad ​​awoodda.
Fadeexado galmo ee Kaniisadda Katooliga, soo bandhigidda biilasha loo jeediyay Golaha dhaqaalaha iyo Bulshada ee Wasaaradda Caddaaladda, qaabka Nicolas Pepe, bayaannada Xuquuqda Aadanaha Watch, kor u kaca qiimaha shidaalka ... Warar ay soo gudbiyeen wargaysyada Ivorian ee arimahooda Talaadada 07 May 2019.
Marka laga reebo oggolaanshaha qoraalka ama iskaashiga horay loo aasaasay, soo noqoshada maqaallada linfodrome.com, xitaa qayb ahaan, waa mamnuuc. Dambiile kasta waa inuu masuul ka noqdaa xukunka.
Bbagbo oo laga eryay Beljamka: Ouattara wuxuu ku biiray Golaha siyaasadeed
Soro sidoo kale
Tiger Woods wuxuu ku guuleystay Medal of Liberty, qurxinta ugu sareysa ee dadweynaha Mareykanka
Ra'iisul Wasaaraha Libya, wuxuu booqday Yurub isagoo raadinaya taageero!